अब: सामाजिक -सञ्जाल चलाउँदैनन् आमिर आखिर् किन ?
ब’लिउड अभिनेता आमिर खानले सामाजिक सञ्जाल चलाउन छाडेका छन्। यसबारे आमिर आफैले ट्विटरमार्फत जा”नकारी दिएको हिन्दुस्तान टाइम्सले लेखेको छ।
‘आइतबारदेखि ५६ वर्ष लागेका आमिरले जन्मदिनमा शुभकामना दिने फिल्म क्षेत्रका अन्य कलाकार र शुभचिन्तकलाई धन्यवाद दिँदै सोमबारदेखि सामाजिक सञ्जाल छाड्ने घोषणा गरेका हुन्।
सोमबार आमिरले ट्विटर र इन्स्टाग्राममा अन्तिम पोस्ट गरेका थिए। साथीहरू, मेरो जन्मदिनमा मलाई दिनुभएको प्रेम र न्यानो मायाका लागि धेरै-धेरै धन्यवाद। मेरो हृदय भरिएको छ,’ उनले लेखेका थिए !
‘तर सामजिक सञ्जालमा यो मेरो अन्तिम पोस्ट हुनेछ। यद्यपि म सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय व्यक्ति हुँ। त्यसैले हामी पहिले झैं सम्पर्कमा भने रहिरहनेछौं।’
आमिरको ट्विट अनुसार उनका फ्यानहरू आमिरको आधिकारिक प्रोडक्सन कम्पनी ‘आमिर खान प्रोडक्सन’
बलिउड अभिनेता आमिर खानले सामाजिक सञ्जाल चलाउन छाडेका छन्। यसबारे आमिर आफैले ट्विटरमार्फत जानकारी दिएको हिन्दुस्तान टाइम्सले लेखेको छ।
आइतबारदेखि ५६ वर्ष लागेका आमिरले जन्मदिनमा शुभकामना दिने फिल्म क्षेत्रका अन्य कलाकार र शुभचिन्तकलाई धन्यवाद दिँदै सोमबारदेखि सामाजिक सञ्जाल छाड्ने घोषणा गरेका हुन्।
सोमबार आमिरले ट्विटर र इन्स्टाग्राममा अन्तिम पोस्ट गरेका थिए’साथीहरू, मेरो जन्मदिनमा मलाई दिनुभएको प्रेम र न्यानो मायाका लागि धेरै-धेरै धन्यवाद। मेरो हृदय भरिएको छ,’ उनले लेखेका थिए!
आमिरको ट्विट अनुसार उनका फ्यानहरू आमिरको आधिकारिक प्रोडक्सन कम्पनी ‘आमिर खान प्रोडक्सन’ मार्फत आफ्नो र उनको फिल्महरूबारे जानकारी लिन सक्नेछन्।
उनी प्रोडक्सन कम्पनीको सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय रहने बताउँदै थप भनेका थिए, ‘एकेपीले आफ्नो आधिकारिक च्यानल सुरू गरेको छ। तपाईंहरूले नयाँ फिल्महरूबारे यसैबाट अपडेट लिन सक्नुहुन्छ। यसको आधिकरिक ह्यान्डल @akppl_official हो। धेरै माया।’
पछिल्लो समय आमिर फिल्म ‘ठग्स अफ हिन्दुस्तान’मा देखिएका थिए। फिल्मलाई विजय कृष्ण आचार्यले निर्देशन गरेका हुन्। यतिबेला भने उनी फिल्म ‘लाल सिंह भड्ढा’को प्रदर्शनको पर्खाइमा छन्। अद्वेत चन्दन निर्देशित फिल्ममा उनीसँगै अभिनेत्री करिना कपुरको मुख्य भूमिका छ।
२०७७ चैत्र ३, मंगलवार १०:२५ 1 Minute 213 Views